Etu ị ga-esi họrọ Okwu ma ọ bụ ndebiri maka saịtị Ecommerce gị ECommerce ozi ọma
Isiokwu ma ọ bụ ndebiri maka saịtị Ecommerce gị bụ nrụpụta weebụsaịtị dị njikere iji nke ahụ ị nwere ike ibudata ma wụnye na weebụsaịtị azụmahịa gị. N'adịghị ka ụzọ ọdịnala nke imepụta ụlọ ahịa n'ịntanetị site na isi, Isiokwu na-enye gị ohere ịnweta ụlọ ahịa dị n'ịntanetị ọkachamara na nke enyi na enyi, na nkeji oge.
1 Akụkụ iji tụlee mgbe ị na-ahọrọ isiokwu Ecommerce
2 Tụlee mmefu ego gị
3 Leba anya na ngwaahịa
4 Kachasị maka mobile
Akụkụ iji tụlee mgbe ị na-ahọrọ isiokwu Ecommerce
Mgbe ị na-ahọrọ otu Ecommerce saịtị templateGa-echekarị na saịtị ahụ kwesịrị ịpụta onwe ya ma kọwaa onwe ya. Ihe ntanetị kachasị e-commerce na-adabere na imepụta ihe, yana iji usoro na usoro a nabatara ebe niile. Achọla Gburugburu Ecommerce Ma ha dị ọhụụ ma ọ bụ na-atọ ụtọ, ọ kachasị mma ịhọrọ maka ndebiri weebụ nke maara, amata, ma dịkwa mfe iji.
Tụlee mmefu ego gị
Mgbe ị na-ahọrọ a Ecommerce isiokwu ọ dị mkpa ka ị tụlee mmefu ego gị na ego ị ga - enweta maka imepụta onyonyo nke ụlọ ahịa ahụ. Ọ bụrụ na mmefu ego gị pere mpe, họrọ maka ndebiri nwere ọkọlọtọ ole na ole. Ọtụtụ oge ị ga - ejedebe ịhọrọ isiokwu dị mma na ọkọlọtọ, mana mgbe ị na - etinye atụmatụ nke aka gị, ị ghọtara na ọdịdị ụlọ ahịa ahụ abụghị ihe ịchọrọ.
Leba anya na ngwaahịa
Mgbe ị na-eji isiokwu ngosi ọ dị mma iche na ihe oyiyi ahụ kwekọrọ na onyonyo nke ngwaahịa gị. Ndị na-emepụta ihe nkiri na-etinyekarị onyonyo ngwaahịa dabara adaba n'ụdị isiokwu. Ya mere, ihe oyiyi gị nwere ike ọ gaghị adị mma.
Kachasị maka mobile
N'ikpeazụ, echefula na Ecommerce isiokwu ị họọrọ, Ọ ga-kachasị maka mobile ngwaọrụ. Ebe ọ bụ na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị mmadụ na-abanye na andntanetị ma jiri ekwentị ha na Tablets na-agagharị na ibe, ọ dị mkpa na saịtị gị na-enye ha ahụmịhe nchọgharị na-eju afọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » CMS na Teknụzụ » Nkuzi na akuru » Etu ị ga-esi họrọ Okwu ma ọ bụ ndebiri maka saịtị Ecommerce gị